क्यान्टोनमेन्ट नम्बर ३७३० | मझेरी डट कम
kbs — Mon, 03/30/2009 - 20:03
आज फेरि हतियार सफा गर्ने दिन हो । यसका लागि पनि समय र दिन तोकिएको छ । एउटा रूटिनमा छ जीवन । यस क्यानटोनमेन्टमा बसेको पनि दुई वर्ष हुन लागेछ । यो यसयलआरबाट गोली नछुटेको पनि दुई वर्ष भएछ । गोली लोड गरेर एकपल्ट पड्काउन पाए हुन्थ्यो-परको त्यो रूखलाई निसाना बनाएर । यस्तै लाग्छ उसलाई । खिया लाग्यो कि, चिन्ता लाग्छ उसलाई ।
लाग्छ, यो क्यान्टोनमेन्ट होइन कैदखाना हो, झ्यालखाना हो । केही पनि त सुविधा छैन । यही घेरा, यही कम्पाउन्ड, काँढेतार भित्रको जीवन । यता घुम्यो उता घुम्यो फेरि त्यही पानी चुहुने छाप्रो । मालचरीको बथानझैँ कहिले पूर्व, कहिले पश्चिम कति स्वतन्त्र र कति फुक्का थियो त्यो जीवन । "आमा, हामी दुश्मनको क्याम्प कब्जा गर्न जाँदैछौँ, लौ रातो टीका लगाइदिनोस् ।" आहा, ती दिनहरू सम्भिmँदासम्भिmँदै मन केके हुन्छ । कहिलेकाहीँ काम विशेषले बाहिर निस्किए पनि बेलुका फेरि आउनुपर्ने त्यहीँ हुन्छ । बाहिर निस्किएको निस्किएै गरौँजस्तो लाग्छ उसलाई तर फेरि तान्छ त्यही प्यारो यसयलआरले । कसरी छोड्न सक्छ ऊ यसलाई । राइफल भन्छ ऊ यसलाई, यही नाम प्यारो लाग्छ, भन्न पनि सजिलो-राइफल । किन छाडेर जाने ? किन भाग्ने ऊ ? हतियारबिना एकछिन पनि कस्तोकस्तो लाग्ने मान्छ हो ऊ । यहीँ क्यान्टोनमेन्टमा त हतियारबिना असुरक्षित असुरक्षित लाग्छ उसलाई । अहँ भाग्ने त कुरै छैन । के भन्लान् घर-परिवार, गाउँले र कामरेडले । ऊ त युद्ध जितेर आएको सिपाही हो । दुश्मनलाई हायलकायल पारेर, प्रत्याक्रमणको चरण पूरा गरेर आएको जनमुक्ति सेना हो, जनगणतन्त्र-जिन्दावाद । फलानो डिभिजन र कम्पनी नम्बर यतिको कमान्डर भाग्यो.... । यस्तो भनाइ ऊसित जोडियोस्, उसलाई मन पर्दैन । भगुवा, अँह यस्तो हुनै सक्तैन । विद्रोह, यो शब्द उसलाई असाध्यै मनपर्छ-विद्रोह गर्नु ठीक हो । कायरहरू अनि पलायनवादीहरू मात्र भाग्छन् । एक्लै मुन्टो हल्लाउँछ ऊ अस्वीकृतिमा ।
"के सोच्तै हुनुहुन्छ हौ कमरेड"-सपना कमरेडको स्वर परैबाट चिन्दछ ऊ ।
"युद्ध, क्यान्टोनमेन्ट र लोकतन्त्र सोचेको ।"
स्वरमा केही आक्रोश र पीडाजस्तो पनि छ ।
"अब त केही टुङ्गो लाग्छ होला होइन ?" "तर हामी हतियार बुझाउँदैनौँ । जनताका दुश्मनहरू हतियार बुझाउने र नष्ट गर्ने कुरा गर्दैछन्, मान्य छैन हामीलाई यो ।" साँच्चिकै आवेगमा थियो ऊ ।
फेरि एक हातमा रेडियो घन्काउँदै र अर्को हातमा यसयलआर समाउँदै कमरेड विक्रम आइपुग्यो ।
एउटै कम्पनिका हुन् यिनीहरू ।
"हाम्रो पछिल्लो मूल मोर्चा सिराहा हो नि ,हैन त कमरेड ?" भुइँमा बस्तै सोध्यो उसले ।
"हो सिराहा हो ।"सासको गति रोकेजस्तो गरी उसले जवाफ दियो र एकोहोरिएर यसयलआरमा आँखा केन्दि्रत गर्यो ।
कति साहसका साथ लडेका थिए उनीहरू त्यो मोर्चामा ।
छेउमै पड्किएका गोली र बारूदका बीच क्रलिङ् गर्दै कसरी अघि बढेका थिए उनीहरू ।
हरायो फेरि सन्तोष कमरेड, नं ३७३० कमरेड । उसैले त कमान्डिङ गरेको थियो पूर्वतिरको आर्कको । लामो इतिहसा छ उसित । करिबकरिब सबै मोर्चाको अनुभव छ उसित । स्क्वायर्डमा पसेको हो ऊ । तेह्रथुम, चैनपुर, भिमान, रूम्जाटार र भोजपुर, यस्ता थुप्र्रै मोर्चाहरूको अनुभव छ उसित । ठूलो किताबका पन्नाहरूझैँ सरसरती एकएक गरेर उभिन्छन् ती दिनहरू । ती मोर्चाहरूमा साथीहरू ढले, थुप्रै होनहार साथीहरू ढले । उनीहरू एकैचोटि पसेका थिए महासमरमा । चैनपुर र रूम्जाटार जित्ताजित्तै हारेको मोर्चा थियो । सम्झदा पनि मन कस्तोकस्तो हुन्छ ।
छुटे, धेरै साथीहरू छुटे ।
कति निर्मम हुन्छ युद्ध । पानीपानी भनेर छटपटिँदै गरेको साथीलाई पानी त के छुन पनि नपाई अघि बढ्नुपर्ने स्थिति, कति नमीठो हुन्छ ।
इलाम एम्बुसमा दुईवटा गाडी उडाएको त्यो घटना संझिँदा पनि मन रोमाञ्चित हुन्छ ।
लाहान मोर्चा उसको सबैभन्दा रोचक मोर्चा थियो र सबैभन्दा साहसिलो मोर्चा मलङ्वा मोर्चा थियो । कसरी झारेका थिए उनीहरूले दुश्मनको हेलिकप्टर ।
"दुश्मनको हेलिकप्टर नजिक आउँदैछ, फायर फायर"-उत्साह र आवेग दुवै थियो । साँच्चै हो मोर्चाको बेला सबै कुरा बिर्सिंदो रहेेछ, मात्र आँखामा दुश्मन आउँदोरहेछ । यस्तो लाग्छ ऊ अहिले त्यही मोर्चामा छ र उसका आँखा, हात र मुटु त्यहीँ छन् ।
फेरि तातो हावा छातीबाट निस्कियो ।
उसका हातखुट्टा र अनुहारको चाल र ताल नियालिरहेको विक्रम कमरेडले हाँस्तै सोध्यो-"क्या हो कमरेड ?"
गीतमा मस्त भएर यसयलआर सफा गर्दै गरेकी सपना कमरेडले एकपल्ट पुलुक्क हेरी र गीतमैँ व्यस्त भई-नरुनोस् आमा लडाइँको मैदान...।
कमरेड सन्तोषको ध्यान पनि गीततिर मोडियो ।
हो त पछिलोपल्ट घर जाँदा आमाले सोधेको पहिलो प्रश्न एकदमै थाहा छ उसलाई, "हाम्रा कामरेडहरू कोही मन्त्री भएका छन्, कोही सांसद भएका छन्, सबै खुला छन्, तिमीहरू चाहिँ कति दिन त्यसरी बस्छौ ?"
कति गाह्रो प्रश्न, पीडादायी पनि । कति गाह्रो परेको थियो उत्तर दिन । सानोसानो भाषण नै गर्नु परेको थियो आमालाई बुझाउन । ऊ पनि त त्यही कुरा छातीमा राखेर बसेको छ- कहिलेसम्म बन्दीझैँ क्यान्टोनमेन्टमा बसिरहने ? आहा, खुला जीवनको अर्थ नै अर्कै छ ।
आमाले बुझी बुझिनन्, सायद बुझिनन् त्यो भाषणजस्तो भनाइ । अनुहारको भावले त्यसै भन्थ्यो । साना बहिनी र भाइले भन्दै थिए- "ए अब त हामी जान दिदैनौँ, आमा रातीराती रोइरहनुहुन्छ ।"
भावुक बनेको थियो ऊ त्यतिबेर ।
"अब सबै कुरा मिलिसक्यो, छिटै घर आउँछु ।"
अमिलो मन लिएर घरबाट हिँडेको थियो ऊ । बाबु छैनन्, एक्ली आमा ।
साँच्चै हो, गम्भीर बन्दै गएको थियो ऊ । अरूलाई सम्झाउन त सजिलो छ, तर आफैँलाई सम्झाउन गाह्रो परेको छ उसलाई । पटक्कै मन छैन, त्यहाँ बस्न । मन रमाउँदैन त्यहाँ । पानी पनि राम्रोसित खान पाइँदैन । स्वास्थ पनि कमजोर भएको छ । पढ्ने-लेख्ने वातावरण छैन । घर जाने ? समायोजन हुने ? हातहतियार सबै बुझाउने ? के सकियो युद्ध, लक्ष्य प्राप्ति भयो ? केका लागि बगेको थियो रगत ? केका लागि भएको थियो त्यत्रो शहादत ? जितेको युद्धको हारेको परिणाम दिएर के घर जाने, के समायोजन हुने- प्रश्नहरू छरपस्ट छन् । घुम्न थाल्छ विगत र वर्तमान । छाती पोल्न थाल्छ । साँच्चै हो, भित्र पनि चैन छैन, बाहिर पनि चैन छैन ।
थरीथरीका कुराहरू सुनिन्छन् । कुनैकुनै कुराले त मनै कस्तोकस्तो हुन्छ । जब हतियारको कुरा आउँछ, छातीको गति बढ्न थाल्छ । अझ हतियार बुझाउने कुराले त केके हुन्छहुन्छ छाती । सबै कुरा गुमाएजस्तो लाग्छ । हिजो बेलुकाको छलफलमा यस्तै कुरा उठेको थियो । स्तब्ध भएका थिए सबै । ज्वालामुखीभित्रको मौनता झन् डरलाग्दो हुँदोरहेछ । सबैको अनुहार भिन्नै भएको थियो । सकियो युद्ध ? आयो जनगणतन्त्र ? कसलाई बुझाउने हतियार ? सबैको अनुहारले यसै भनिरहेझैँ लाग्थ्यो । आगोको भुङ्ग्रोको सामु सबै उभिएका छन् जस्तो बोध भएको थियो ।
त्यही कुरा मनमा खेलाउँदाखेलाउँदै उसको मुखबाट निस्कियो- "अहँ, यत्तिकैमा बुझाइँदैन ।" उसको आवाज सुनेर बीचैमा बोली सपना कमरेड- "के भन्नुभएको कमरेड ?" पहिले त ऊ झस्कियो तर तुरुन्तै उत्तर दियो- "कति दिन बस्ने कैदीझैँ भएर ? अब विद्रोह गर्ने भनेको ।" केही बुझेजस्तो र केही नबुझेजस्तो अनुहार पारेर हेरी सपना कमरेडले । लगातार स्टि्रगर दबाएर यसयलआर घुमायो चारैतिर- ट्याक-ट्याक-ट्याक । मानौँ ऊ दुश्मनलाई गोली हानिरहेको छ ।
"खेर जाने भयो बगाएको रगत" एक्लै फतफतायो ।
हत्तपत्त आवेगमा आउने मान्छे होइन ऊ तर आज केही फरक देखिएको छ । के भएको हो यसलाई ? साथीहरू उसलाई हेर्नथाले ।
घाम निकै माथि आइसकेका थिए ।
अब फेरि हतियार थन्क्याउने बेला भयो । यसै गरी निकाल्यो र तलदेखि माथिसम्म टुलुटुलु हेर्यो, सुमसुम्यायो र थन्क्यायो । गन्ति नै छैन कतिवटा मोर्चा लड्योलड्यो यसले । यसलाई हातमा लिँदा मात्र पनि कति फुर्ति आउँछ उसमा । आत्मबल बढेर आउँछ । यो नहुँदा केके हराएजस्तो, केके नभएजस्तो रित्तो अनुभव हुन्छ उसलाई । सुरुमा थन्क्याएको कति दिनसम्म त निन्द्रा पनि लागेन उसलाई ।
साँच्चै हो, त्यो रात रातभरिजसो रोयो ऊ । छट्पटी मात्रै भयो । सिङ्गै लडाइँ हारेस्तो भयो । कतिपल्ट मनमा आएको पनि हो- भागौँ योसित । उसलाई थाहा छ, हतियारबाट हतियार आउँछ । गोली, खोइ गोली ? छैन गोली उसित । गोलीबिनाको राइफल झन् खतरनाक हुन्छ । हुन्न यसो गर्नु झन् हुन्न । फेरि छापामार लडाइँ ? मनमा सबै कुरा आउँछन् । कहिले मुक्त हुने यो कैदखानाबाट ? चिन्ता त छ तर यसरी भाग्दैन ऊ । ऊ त बहादुर सिपाही हो ।
मेरो प्यारो ओखल्ढुङगा
सिमल चरी अर्थात् गोलसिमल
तिम्रै लागि रचिएका गीत
सुन्नु छैन कुरा तिम्रो
अतिथि र हतार
भन्थिन् मेरी आमाले
लुट्नेहरू महान अरे
रातभर जून रोयो तिमीलाई सम्झी
तिमी समुद्र म चाहिँ खहरे खोला
सागर म लहर बनी